Ezemvelo Inkanyezi Zulu 2010 by Marc Russell Abbott - issuu
EZEMVELO KZN WILDLIFE – IPHEPHABHUKU LANGAPHAKATHI ELISEMTHETHWENI
A K A Y 2 N 4 I IM AMA- NZA E G A B N L E E E S K U I K N I O Z Y U K O G “Ub N umn a w
UHlelo lokuBambisana kwezoKongiwa kweMvelo
i ong “Uku ukho davu h lwa” eke kuwu za ko m d ukwe uzwa o uka-tho k le qe.” unga mele bamahla th nang ephu i tha
Umbono, Injongo kanye neziMiso eziBalulekile Umbono “Ukuba ngungqaphambili kwezokongiwa kwemvelo ehlukahlukene emhlabeni” Jetros Vilana joined the Organisation in March of 1967 where he started his career in Game Capture Centre as a member of the antelope capture team. Here he formed part of the legendary team that pioneered the use of the funnel capture technique which has become the world standard. His passion and dedication for game capture has seen him remaining in the unit for the past 42 years where he currently holds the position of Chief Animal Attendant. Here he plays a pivotal role in the management of the unit and provides valuable insight and guidance to the members of the team. “Your dedication, perseverance and sense of duty is a shinning light for us all to follow. The service you have given Ezemvelo KZN Wildlife is of an excellent nature. You continued service you give us is of far more value than what we can ever give you in return”. Jetros Vilana. “On behalf of the Organization we thank you for your continued commitment, loyalty and selfless service”. CEO, Dr Bandile Mkhize.
Umbono, Injongo kanye neziMiso
Amazwi Omphathi Omkhulu
Ubumnandi ongeke Ubukhohlwe
Indawo yokuqala eyihlathi emenyezelwe njengeyokongiwa kwemvelo
I-Ezemvelo incoma abasebenze kahle
Ikhasi lesi-7 nelesi-8
Imali yesiVivane soMphakathi iqinisa amathuba okuthuthukiswa kwemiphakathi yasemakhaya.
Ikhasi lesi-9 I-Ezemvelo Cup
Silungiselela ukwamukela abamazwe oMhlaba
Umkhankaso wokugqokwa kwejezi leBafana Bafana ngoLwezihlanu kanye nokwakha inhlangano ezimisele ngokuhlinzeka izidingo
Injongo “Ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wokongiwa kwemvelo wenziwa kahle futhi ukongiwa kwemvelo yaKwaZulu-Natali kwenziwa ngokubambisana nezinhlaka zethu, ukuze kuhlomule isizukulwane samanje nesangomuso”
Izimiso eziBalulekile • Ukwethembeka – ngaso sonke isikhathi sisebenza ngokwethembeka, senze ngendlela efanele kanye nangeqiniso. • Inhlonipho– sibekezelela izinhlaka esisebenzisana nazo, ngokuzithoba sihloniphe amalungelo azo kanye nawendalo. • Ukubika– sibambisana nezinhlaka zethu ezinhlelweni zenhlangano ngokuvuleleka kanti futhi siyakwazi ukuphendula ngemiphumela yesikwenzayo. • Ukusebenza ngokubambisana– sisebenza ngokubambisana ukufezekisa umbono wethu ngokulandela izimpokophelo esinazo. • Ukuphucuzeka– siyinhlangano ejwayelekayo esebenzisa isiko lokwamukela imibono emisha nelokufunda. • Ukwenza kahle kakhu-
lu- siyinhlangano enenqubekela phambili futhi esebenza kahle ukuzuza okusezingeni nokuseqophelweni eliphezulu. • Ukuzibophezela– ngaso sonke isikhathi senza umsebenzi wethu ngothando, ngokwethembeka nangokuzinikela. • Umkhiqizo–sizimisele ngokukhiqiza ngesikhathi, ngendlela esheshayo futhi efanele.
Ithimba elididiyela izindaba UMhleli oyiNhloko - UDkt Bandile Mkhize UMhleli Ophethe -UMnuz Simpiwe Mxakaza Ithimba lezindaba -UMaureen Zimu, uJeff Gaisford noLindiwe Mfeka Imisebenzi yeziLimi -UPhilani Ncalane Ukuhlelwa kwamaKhasi neziThombe Ngabe -Mediacom SA
Ilungelo lokuShicilela Inkanyezi iyiphephabhuku langaphakathi eliphuma ngekota yonyaka kanti lishicilelwa wuPhiko lwezokuXhumana kwaEzemvelo KZN Wildlife (Ezemvelo). Amalungelo akho konke okushicilelwe agodliwe kanti akumele kusetshenziswe ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi yoMhleli oyiNhloko.
anibonani bozakwethu, saphinde sahlangana futhi onyakeni ka-2010, ngiyethemba ukuthi nibe namaholide amahle nezihlobo nabangani. Lona ngunyaka oyingqophamlando eNingizimu Afrika njengoba sekusele amanenjana ezinsuku kuqale imidlalo yeNdebe yoMhlaba ezokuba kuleli. Lona ngunyaka wokuhlinzeka izidingo zomphakathi kanti kumele sonke sikulungele ukubamba iqhaza elibonakalayo ekuthuthukisweni kwemiphakathi yasemakhaya. Unyaka odlule ube yimpumelelo. Sikwazile ukushintsha izinto eziningi futhi sasungula izinhlelo eziphusile. Lokhu bekungeke kufezekiswe ngaphandle kokusebenza ngokuzikhandla nangokusekelwa ngabasebenzi. Qhubekani nomsebenzi wenu omuhle futhi nihlale nigqugquzelekile ukwenza okungaphezulu ngaso sonke isikhathi. Ngizothatha leli thuba nginazise kafishane ngezinhlelo esizenzile ngonyaka ka-2009. Siqale ngegiya eliphezulu sakha uHlelo lokuSebenza lweMinyaka emihlanu ngenhloso yokwenza ngcono ukusebenza kwenhlangano, kanye nalolu hlelo siqhamuke necelo lokuhlanganisa izinsiza kusebenza zenhlangano nalolu hlelo, sase siqalisa uHlelo lokusatshalaliswa kolwazi (ERP). Lokhu kuhlanganiswa
kwamasu okusebenza kanye nezinzisa sekusesigabeni sokuqaliswa njengamanje. Ngizothanda ukuthatha leli thuba ngigcizelele kubasebenzi bethu ukuthi lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuqinisekisa ukuthi senza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu ngalezo zinsiza ezincane esinazo ngaso sonke isikhathi nokuthi lokhu akuhlosiwe ngakho ukugudluza abantu emsebenzini. Uhlelo lwe-ERP selungasemaphethelweni njengoba usuku lokuqala kokusebenza kohlelo lokuSebenza lweBhizinisi lube mhla lu-1 kuNhlolanja ka-2010. Zonke ezinye izinhlelo ezibandakanya ukukhishwa kwemisebenzi, olokuPhathwa kwezimali njj, zizoqala ukusebenza mhla lu1 kuMbasa ka-2010. Sinesiqiniseko esigcwele sokuthi lezi zinhlelo zizohamba ibanga elide ekuqinisekiseni ukuthi izinhlelo zethu zokusebenza zizosimama ukuze zithele izithelo ezinhle. Siqale izinhlelo eziningi zokuxhumana kanye nezokumaketha ukuqinisekisa ukuthi i-Ezemvelo KZN Wildlife iba nesithunzi futhi ihlale njalo isemiqondweni yabantu baseNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele. Ngalezo zinhlelo sikwazile ukubhekana nezimo lapho besinokungezwani kahle nomphakathi. Sesingakusho kugcwale umlomo ukuthi njengenhlangano, sesiphinde
3|Conservation, Partnerships & Ecotourism
sazuza ukwethembeka emphakathini futhi senza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi sibuyisela le nhlangano ezingeni okumele ibe kulona. Njengomphumela wokusebenza kwethu ngokuzikhandla, sithole imiklomelo evela kwabe-PMR Africa nabe-AA Travel Guide ngezindawo zethu zokulala i-Hilltop kanye neNtshondwe. Silale isibili kuma-FNB KwaZulu â&#x20AC;&#x201C; Natal top Business Portfolio okube yinto enhle kakhulu. Simenyelwe ukulanda imiklomelo emibili eEurope, okuyi-Golden Award for Tourist, Hotel and Catering Industry ka-2010 kanye ne- 25th Annual Golden Europe Award for Quality. Sesibe nenqubekela phambili ebonakalayo ekuqiniseni amaxhama okuxhumana nezinye izikhungo zikahulumeni zokuhlinzeka izidingo zomphakathi kanjalo nomkhakha ozimele emkhankasweni wethu wokufezekisa umgomo kahulumeni wokuhlinzeka izidingo emiphakathini yasemakhaya ngoHlelo lwethu lokuBhekelela uMphakathi ngokubambisana, iMali yeSivivane soMphakathi nezinye izinhlelo zemisebenzi yomphakathi ezingaphansi kwejoka lethu njengoHlelo lokuSusa iziMila zokufika kuleli. NgeMali yesiVivane soMphakathi sikwazile ukuhlinzeka izidingo ezimqoka kwinhlalonhle yomphakathi owakhele
Dr Bandile Mkhize CEO
iziqiwi zethu. Ngonyaka ka-2009 sibone kubuyiselwa iBhodi le-Ezemvelo ebelikade limisiwe kanti nesiKhulu esiPhezulu ebesiqokwe okwesikhashana kudingeke ukuba siyeke imisebenzi yaso. Izimemo zokuphakamisa amagama amalungu eBhodi elisha zithunyeleliwe ezinhlakeni ezifanele kanti kumanje sesineBhodi elisha. Amalungu amasha eBhodi ngoMnuz Z C Ngidi (onguSihlalo), Inkosi B F Bhengu, Nkk D M Dold, Nkk B P Mchunu â&#x20AC;&#x201C; Mzila, Nksz P S Dlamini, Nksz T Dlamini, Inkosi M I Tembe, Dkt A T Nzama, Mnuz W U Nel kanye noMnuz S N M Dladla. Siyathemba ukuthi sizothola ubungoti kanye nesipiliyoni abanaso nemibono yabo emqoka ekusebenzeni kwe-Ezemvelo KZN Wildlife. Endimeni yezokongiwa kwemvelo sibone kusungulwa izinhlelo eziningi eziphusile. Sibona sinyuka kancane isibalo somhlaba owenganyelwe ngabantu abazimele. Sisayine isivumelwano nabeMabandla Tribal Authority ngokunjalo na-
beGumbi Tribal Authority okuzobamba elikhulu iqhaza ekwandiseni umhlaba ongama-18603 ha okuzomenyezelwa okuzokuba nomthelela omuhle ohlelweni lwethu lokubambisana kwezokongiwa kwemvelo. Sifakazise ukugcotshwa ngokusemthethweni kweBhodi yoMphakathi waseNsikeni ebesikade sikulindele emizamweni yethu yokuqinisa ubudlelwano nemiphakathi eyakhele iziqiwi zethu. INsikeni Nature Reserve engaphansi kweMabandla Tribal Authority imenyezelwe ngokusemthethweni njengendawo ebalulekile yokuvikela amaxhaphozi nezindawo ezinamanzi ngokwesivumelwano esasayinwa eRamsar. Lokhu kumenyezelwe yiSekela likaNgqongqoshe kazwelonke wezeMvelo
uNkk Joyce Mabudafhasi mhla zi-2 kuNhlolanja ka-2010 emcimbini obubanjelwe e-South African National Botanic Institute. Lokhu kungumsebenzi oncomekayo wenhlangano ngokunjalo nomphakathi waseNsikeni wokonga amanzi ukuze kuhlomule isizukulwane saseNingizimu Afrika samanje nesangomuso. Sizibandakanye nomkhankaso wokuhlanzwa kwemvelo obungonyaka odlule kanti ubuhlanganisa nohlelo lwamiNyaka yonke lokuHlanzwa kwamaBhishi ebesilufuqa ngokubambisana nabakwa-Vodacom, uMasipala weTheku kanye nezinye izinhlaka olwaba yimpumelelo. Sibe nomcimbi wokuklomelisa obuhlanganisa nezikole eziningi ebeziyingxenye yomkhankaso wokuqinisekisa ukuthi
sivikela imvelo yethu yasolwandle ebibukeka ishabalala. Sihole uHlelo lokuHlanzwa komFula i-Willowfontein sibambisene nehhovisi likaNdunankulu ngaphansi koPhiko lukaMama wesifundazwe nolube yimpumelelo enkulu. Sifisa ukuphinde sibandakanye eminye imiphakathi kulolu hlelo ukuze sikhuthaze ukuhlanzwa kwezindawo zamanzi ayingxenye emqoka kakhulu emiphakathini yethu. Sigubhe iminyaka engama-50 yokongiwa kwezindawo zasendle njengoba iHluhluwe – Imfolozi Park yethu kube yiyona ehole lo mkhankaso kusukela emandulo. Lo mgubho ubuhanjelwe ngabantu abamqoka emlandweni wokongiwa kwemvelo ngokunjalo nezivakashi ebeziqhamuka emazwe-
ni angaphandle. Siqinise amaxhama okusebenzisana ne-Isimangaliso Wetland Park Authority kanti futhi ngiyajabula ukusho ukuthi lobu budlelwano buthela izithelo ezinhle. Sinemihlangano yabaphathi esiyibamba ngokuhlanganyela futhi esisebenzela phezu kwayo. Kumele siqhubeke nokukhuthaza lesi sisekelo sokusebenza kwenhlangano kuzona zonke izinhlaka ezithintekayo nezinentshisekelo ukuqinisekisa ukuthi ukongiwa kwemvelo kuseqhulwini ezihlelweni zazo. Sithanda ukunxenxa bonke abasebenzi nezinhlaka zethu ukuba basijoyine embhidlangweni wethu wokuba ngungqa phambili kwezokongiwa kwemvelo emhlabeni jikelele futhi siqinisekise ukongiwa nokuset-
“Ubumnandi ongeke wabukhohlwa” Ukubona noma yisiphi isilwane esikwi-Big Five uhamba ngezinyawo kukunikeza umuzwa ongeke uwukholwe.
kudavuza koduka-thole bamahlathi kuwumuzwa okungamele nangephutha ukweqe. Izinto ezifana nokubona obhejane belele phansi kwesihlahla bese nihamba ngokubazungeza, nijeqeza ukuthi abanilandeli yini-ukuzithela noma yikusiphi isilwane phakathi kwezikwi-Big Five noma esinye nje
isilwane nibe nihamba ngezinyawo, konke lokho kuyingxenye yokubona izinto ezingakholakali empilweni. “Ngezinsuku ezimbalwa nje ukulobu buhle nokugqama kwemvelo engakonakaliswa ngabantu, umphefumulo kanye nengqondo kuyavuseleleka,” kusho uMaureen.
Umholi wethimba eliguduzayo – uRick Wilson noMaureen Zimu oyi-Internal & External Communications kwa-Ezemvelo KZN Wildlife kanye nethimba lezintatheli beguduza ehlathini laseMfolozi eHluhluwe-Imfolozi Park. Lena yindawo enhle kakhulu yokubukela phezulu uMfula iMfolozi.
sifundazwe saKwaZulu-Natali sinothe ngezinto eziningi zokongiwa kwemvelo, ezigqanyiswa wukwanda kwezindawo eziyizinkangala ezinhlobonhlobo esifundazweni. Ngenxa yalokhu, kunezindawo eziningi ezisetshenziselwa izinto ezahlukahlukene esifundazweni okubandakanya indawo enkulu esetshenziselwa ukutshala izihlahla. UHlelo lwe-Grasslands oludidiyelwa ngabeSANBI futhi olwesekwe ngezimali ngabe-GEF, luwuhlelo olumqoka okuhloswe ngalo ukubandakanya imboni yezamahlathi ekuphathweni kwemvelo ngokuthi kwenziwe ukuvikelwa kwemvelo kuhambisane nemisebenzi yamabhizinisi. Omunye wemisebenzi emqoka yalolu hlelo ukugcina lezo zindawo zemvelo ezingalinyiwe ezingakwazi ukusetshenziselwa ukongiwa kwemvelo kulama simu ezihlahla ngokusebenzisa uhlelo lokubambisana. Isu lokubambisana kwezokongiwa kwemvelo lithola idumela elikhulu njengendlela yokubandakanya abanikazi bomhlaba kanye nabomphakathi ukubavumela ukuba bahlomule kwezokongiwa kwemvelo futhi bakwazi ukuhlomula ngqo kwezomnotho kulezo zindawo eziset-
shenziselwa ukongiwa kwemvelo. I-Ezemvelo KZN Wildlife isungule uhlelo lokuBambisana kwezoKongiwa kweMvelo esifundazweni ukuqinisa amaxhama okuxhumana kwezindawo zokongiwa kwemvelo futhi kusimamiswe ukuphathwa kwemvelo emhlabeni ophethwe ngokuzimela nokahulumeni. I-Ezemvelo KZN Wildlife ibambisene naboHlelo lwe-Grasslands ophikweni lwabo lwamaHlathi ukuze isebenzisane nezinkampani ezithile zamahlathi ezithintekayo ukuthuthukisa izivumelwano zokubambisana kwezokongiwa kwemvelo kumhlaba okungalinyiwe kuwona ezindaweni zabo. Eyodwa yezindawo i-Ezemvelo KZN Wildlife esebenzisana nazo yi-Mt Gilboa Estate, ephethwe ngabe-Mondi Shaduka Newsprint. Okwenza le ndawo ibe ngekhethekile wukunotha kwayo kwezokongiwa kwemvelo ikakhulukazi uma kubhekwa izitshalo nezilwane ezigciniwe kanye nokutholakala kwamanzi. Inama-283 ha we-Midlands Mistbelt Grassland “osengozini enkulu” kanti iphinde inikele ngo-0.22% ezinhlosweni zesifundazwe ngalolu hlobo lwezitshalo. Iyindawo ebaluleke kakhulu yohlobo olusengcupheni njen-
5|Conservation, Partnerships & Ecotourism
goba i-Wattled Crane “ilengela engozini enkulu” ngokunjalo nolunye uhlobo olumaphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natali. Le ndawo iphinde ibaluleke kakhulu esifundazweni ngokukhiqiza amanzi. Le ndawo iqukethe iziphethu zemifula emithathu ebalulekile: Umfula Umvoti, Umfula iMyamvubu ochithela e-Mooi River kanye noMfula uMholweni wona ochithela emfuleni Umngeni. Okuhambisana nale mifula, izindawo ezivulelekile ezinamanzi nalapho kwenziwa khona imisebenzi ethinta ukusetshenziswa kwamanzi njengokuwahlanza kanye nokugwema izikhukhula. Abe-Mondi Shanduka Newsprint abaphethe cishe umhlaba ongamahector angama-60,000 esifundazweni saKwaZulu-Natali, esikhathini esedlule bakhombise ukuzinikela ekongiweni kwemvelo futhi bagunyazwe wuMkhandlu wokuBambisana ekuphathweni kwamaHlathi (FSC). Lona ngumgomo wokuqinisekisa ukuthi ukuphathwa kanye nomkhiqizo yezingodo kakulimazi ukunotha kwemvelo ezindaweni zabo. Lokhu kuchaza khona ukuthi bayalwamukela uhlelo lokuBambisana kwezokongiwa kwemvelo futhi base-
benza ngokubambisana nabe-Ezemvelo KZN Wildlife ekugcineni izindawo okungatshaliwe kuzona e-Mt Giboa Estate kuhlanganisa neKakrloof Nature Reserve. Lokhu kuzinikela sekuholele ekutheni i-Mt Gilboa Nature Reserve ibe nengxenye engama-725 ha yalo lonke ipulazi eyithole ngokusemthethweni ngaphansi kwesigaba 23 soMthetho kaZwelonke wokuPhathwa kweMvelo ezindaweni ezivikelekile (No 57 ka 2003) mhla ziyi-14 kuMasingana ka-2010. Lena yindawo yokuqala eyihlathi ukumenyezelwa njengeyokongiwa kwemvelo ezimele esifundazweni saKwaZulu-Natali kusetshenziswa uhlelo lokuBambisana kwezokongiwa kweMvelo okuzoqinisekisa ukuphathwa kwemvelo kule ndawo futhi kungubufakazi bokuthi ngokubambisana, imboni yamahlathi ingabamba iqhaza elithile ezinhlosweni zokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natali. Lokhu sekube yisibonelo nakwezinye izinkampani ezizimele zamahlathi kule ndawo kanti iEzemvelo KZN Wildlife iyakwamukela ubudlelwano obukwazi ukuthela izithelo futhi iyalincoma kakhulu iqhaza labeMondi Shanduka kwezokongiwa kwemvelo esifundazweni.
I-EZEMVELO KZN WILDLIFE INCOMA ABASEBENZE KAHLE
hla zingama-28 kuMasingana ka-2010 sibe nomcimbi wokuhlonipha ozakwethu asebesebenze ngokuzinikela nangokwethembeka enhlanganweni. Besinemikhakha emibili yemiklomelo kulo mcimbi, okungowalabo asebesebenze isikhathi eside nowabasebenza ngokuzinikela. Simemele bonke labo zakwethu endaweni evuna wonke umuntu okungMgungundlovu lapho sibanikeze khona izitifiketi nezipho ukubancoma ngokusebenza ngokuzikhandla ekufezekiseni izinjongo zenhlangano. Kwasebesebenze isikhathi eside besinemikhakha eyisihlanu elanelayo: abeminyaka engama-21, abeminyaka engama-25, abeminyaka engama-28, abeminyaka engama-35 kanye nabeminyaka
engama-42. Sesisonke isibalo sabahlomulile kule miklomelo singama-564 kanti ukuhlukaniswa kwemikhakha kunjengoba kulandela ngezansi. Le miklomelo inikezwa abasebenzi abakhombisa isibindi emsebenzini yabo eziqiwini futhi abazithola besezim-
weni ezinobungozi lapho kufanele bavundulule khona izibhamu ezisetshenziselwa ukuzingela ngokungemthetho, izinja zokuzingela kanti babuye basebenze ezimweni ezithinta izinto ezebiwe ikakhulukazi Okhahlamba Drakensberg Park. Laba basebenzi baphinde babe
nomthwalo wezinga eliphezulu lokubopha abantu abathinteka emacaleni ezemvelo. Imikhakha yale miklomelo icaciswa yisibalo esiphezulu sezibhamu ezitholwe yilaba baqaphi bemvelo futhi inikezelwa ngendlela efanele.
Long service Awards Region QEP Zululand Ukhahlamba Coast Total
21 YRS 23 81 105 121 330
25 YRS 20 35 26 34 115
Categories 28 YRS 8 17 27 41 93
35 YRS 4 6 8 7 25
42 YRS 1
Meritorious Awards Region Isimangaliso Wetland Park Hluhluwe Imfolozi Park Tembe Elephant Park Ukhahlamba Drakensberg Park Monks Cowl Cathedral Peak Overall Total
1 16 4 8 2 0 30
Categories 2 3 4 10 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 13
Quantity of Awards 0 29 0 6 0 8 1 0 1
Imali yesiVivane soMphakathi ye-Ezemvelo KZN Wildlife iqinisa amathuba okuthuthukiswa kwemiphakathi yasemakhaya
IMANKONJANE PRIMARY SCHOOL - EMTSHEZI
ona kube wunyaka onempumelelo ohlelweni lweMali yesiVivane soMphakathi lapho sihlinzeke khona imiphakathi engomakhelwane beziqiwi zethu ngezinhlelo ezahlukahlukene ngenhloso yokuyihlomulisa. Sakhe izikole, izakhiwo zokusebenza kanye namahhovisi, izikhungo zamakhompuyutha, izinkulisa kanye nezinhlelo ezingenisa inzuzo ebezigqugquzela ukubandakanya abesifazane, intsha kanye ne-
zakhamizi ezingasebenzi ngenhloso yokudala amathuba emisebenzi ngokuthi abantu bazisebenza bona. Sithole izicelo eziyinqwaba emiphakathini yasemakhaya eyakhele iziqiwi zethu zokusiza ngezinhlelo zokuyithuthukisa. Siziphendule ngokushesha lezi zicelo kanti senze lokhu okungangamandla ethu. Ngonyaka ka-2009 sixhase izikole ezihlwempu ngengqalasizinda ehlanganisa izakhiwo
7|Conservation, Partnerships & Ecotourism
zokufunda, zabasebenzi kanye namahhovisi kanjalo nezikhungo zamakhompuyutha. Phakathi kwezibe nenhlanhla singabala isikole iNdabeni yaseManguzi, inkulisa iNhlosenhle yase-Elanskop kanye nenkulisa iNdabenhle yase-St Lucia. Siphinde sasiza umphakathi waKwaMavundla ngohlelo lokufuywa kwezinkukhu ukuwukhuthaza ukubamba iqhaza kwezomnotho. Ekugcineni, sikwazile
ukuphothula uhlelo lweNselweni Bush Camp obeselubambezeleke isikhathi eside kakhulu kanti iningi kakhulu imali etshalwe kulona ukuqinisekisa ukuthi luba yimpumelelo. Sinikezele ngokusemthethweni ngalesi sakhiwo emiphakathini ethintekayo ngasekupheleni konyaka odlule ngenyanga kaZibandlela. Sibe nobudlelwane nezinkampani ezizimele ezihlanganisa i-Al Baraka Bank kanye neKwaZulu Natal Sharks Board ababe wolukhulu usizo emshikashikeni wokwenza ngcono impilo emphakathini, kanti lobu budlelwano bamukeleke ngezandla ezimhlophe futhi sijabule kakhulu ngokusebenzisana nalezi zinhlaka. Ngobudlelwano esibe nabo nabe-KZN Sharks Board, sihlinzeke izikhwama eziyi-3000 ezikoleni eziyishumi nambili ezisezindaweni zasemakhaya ezingomakhelwane beziqiwi zethu. Mhla zingama27 kuMfumfu ka-2009 sidlulisele ngokusemthethweni izikhwama eziyizi-1100 kubafundi bezikole zasemakhaya ezakhele i-Giants Castle. Ngalolu suku besihlanganyele neLungu
loMkhandlu Ophethe elibhekele uMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natali, uMnuz Senzo Mchunu. Siphinde sahlanganyela nezinkampani ezifana no-Boxer Super Stores, abakwa-Spar, abakwaAlbany Bakery, iHallmark and Embroidery, iGolden Window ne-WWF abanikele ngezinto ebezizofakwa ezikhwameni. Ngobudlelwane nabeAl Baraka Bank sibone kufezeka iphupho lokufunda ezikoleni zasemakhaya ngokuba sinikezele ngezinsiza zokubhala eziphathwayo ezikoleni ezintathu (3) zasendaweni yaseMkuze naseKosi Bay. Baphinde banikela ngamakhompuyutha angama-25 kanye nokuwaxhuma kanjalo nefenisha eThibani Combined Primary School eMtshezi. Kumanje siphansi phezulu nokuxhuma ifenisha yamakhompuyutha kanye nokwakha umtapo wolwazi Ozabeni Primary School bude buduze neSodwana Bay Nature Reserve. Ukuqhubekela phambili ngokuhlinzeka izidingo ngalolu hlelo, sinxuse abakwa-Al Baraka Bank ukuba basayine isivumelwano sokusebenzisana nathi (MOU) okuzosisiza ekutheni siqinisekise ukuthi siqinisa amaxhama ohlelweni lweSikhwama sesiVivane soMphakathi. Ngale MOU sizokwazi ukuhlanganisa imali yezindleko yalezi zinhlelo naleli bhange ukuze kuhlomule umphakathi esiwusebenzelayo. Sizo-
qhubeka nokubheka ezinye izinhlaka ezinentshisekelo ukuze sisebenze
ngokubambisana nazo ukuqinisekisa ukuthi imali yethu iyaqhubeka
nokubamba iqhaza ekusizeni umphakathi esiwusebenzelayo.
IZIMELE PRIMARY SCHOOL – EMTSHEZI
INTOMBEMHLOPHE PRIMARY SCHOOL – EMABIBI – COASTAL FOREST
INTABAMHLOPHE PRIMARY SCHOOL – EMTSHEZI
ITHIBANE COMBINED PRIMARY SCHOOL - EMTSHEZI
KZN PREMIER DR ZWELI MKHIZE, MEC FOR KZN AGRICULTURE, ENVIRONMENTAL AFFAIRS & RURAL DEVELOPMENT, MS LYDIA JOHNSON AND EZEMVELO CEO, DR BANDILE MKHIZE DURING THE OFFICIAL OPENING OF NSELWENI BUSH CAMP IN HLUHLUWE IMFOLOZI PARK.
I-EZEMVELO CUP Mdletsheni Traditional Council FC - Runners Up
midlalo yamanqamu ye-Ezemvelo Cup ibanjwe mhla ziyi-16 kuZibandlela ka 2010 Olundi Regional Stadium, Olundi kanti isasasa elikhonjiswe ngamalungu omphakathi abeyihambele limangaze kakhulu. Umdlalo wamanqamu webhola lezinyawo ubuphakathi kwe-Mdletsheni Traditional Council FC neMatshamnyama Traditional Council FC kanti kwelomnqakiswano ubuphakathi kwe-Mpukunyoni Traditional Council ne-Mhlana Traditional Council. Ngebhadi-ke lapha bekumele kunqobe ikilabhu eyodwa ngokwahlukana kwemidlalo. Ebholeni lezinyawo, iMatshamnyama Traditional Council inenebule iMdletsheni Traditional Council FC ngo 4-1 okukubeke kwacaca ukuthi ibufuna ukuqopha
umlando nokukhombisa ukuthi ingomakhonya. Ngokudla ubhedu, iMatshamnyama Traditional Council FC ihlomule ngesigaxa semali engu-R 10,000.00 kanye nezindondo zegolide. IMdletsheni Traditional Council FC elale isibili ithole u-R 5,000.00 ohambisana nezindondo zesiliva kwathi Obuka Traditional Council FC obulale endaweni yesithathu bathotshwa izinhliziyo ngo-R 3,000.00 obuphelezelwa yizindondo zethusi. Kwelomnqakiswano, iMpukunyoni Traditional Council ihlue kunzima iMhlana Traditional Council ngo 21-18. Njengoba bekumele kunqobe oyedwa, iMpukunyoni Traditional Council yiyona egcine igoduke no-R 5,000.00 ohambisana nezin-
9|Conservation, Partnerships & Ecotourism
Matshamnyama Traditional Council FC - Winners
dondo zegolide. IMhlana Traditional Council elale isibili igixabezwe ngo-R 3,000.00 ohambisana nezindondo zesiliva. Abalale isithathu kube yiSomopho Traditional Council ethole u-R 2,000.00 kanye nezindondo zethusi. Umqhudelwano ube yimpumelelo futhi
udonse inqwaba yabaxhasi abelule isandla. Abadidiyeli balo mqhudelwano bathanda ukubonga bonke ababambe iqhaza ekuhlelweni kwawo kanye nabaxhasi ngomusa wabo ekunqumeni ukubambisana ne-Ezemvelo KZN Wildlife.
I-Ezemvelo KZN Wildlife Silungiselela ukwamukela uMhlaba wonke
msebenzi onzima usaqhubeka namanje kwa-Ezemvelo KZN Wildlife wokulungiselela ukwamukela izivakashi ezizothutheleka kuleli ngesikhathi semidlalo yeNdebe yoMhlaba. Sisemgqeni okahle wokuqinisekisa ukuthi zonke iziqiwi nezindawo zethu zokulala kusezingeni eliphezulu futhi kuphothulwa ngesikhathi ukulungiselela imidlalo yeNdebe yoMhlaba ezobanjelwa kuleli kusukela ngenyanga kaNhlangulana kuya kuNtulikazi kulo nyaka. Umsebenzi wokulungisa kabusha izindawo
zethu zokulala eziyi-8 eziphambili ,okuyiDidima, iMidmar, iGiantâ&#x20AC;&#x2122;s, iThendele, iNtshondwe, iMpila, iHiltop kanye neMlalazi uyaqhubeka njengoba sikhuluma nje. Kumanje siphansi phezulu nomsebenzi wokulungisa ngaphandle nangaphakathi kanti nokulungiswa kwengqalasizinda njengemigwaqo, izimpawu, ukuhlanzwa kwamanzi nezimoto kuyasetshenzwa ukuze sikwazi ukuba ngongqa phambili kwesincintisana nabo ngesikhathi sale ndumezulu yomqhudelwano. Kuwona lowo mnyama,
siphansi phezulu nokuhlela ukunyusa izinga lezindawo zethu zokulala liye ku-3 ngaphansi kwe-Tourism grading council of South Africa, ukuqinisekisa ukuthi izivakashi zethu ezivela emazweni angaphandle zithola usizo ngendlela esezingeni eliphezulu ezindaweni zethu. Sihlela nokuthi sibe nezindawo ezivulelekile zokubukela le midlalo ezikhokhelwayo zokuthi umphakathi ukwazi ukubona le midlalo ezindaweni zethu okuyi-Midmar kanye naseMlalazi ezizosetshenziselwa ukukhangisa ngezindawo
zethu ezivakashini ezingeke zikwazi ukuya ezinkundleni ngokunjalo nokukhangisa ngezinto ezinziwa emiphakathini eyakhele iziqiwi zethu. Ukuqinisa umkhankaso wethu wokubamba ngazo zombili leli thuba, sisayine inkontileka neMATCH Hospitality AG enamalungelo okulawula zonke izindawo zokulala nokuhlela izinto zokuthutha ngaphansi kweFIFA, ngenhloso yokuba isidayisele izindawo zethu zokulala ngesikhathi semidlalo.
Ukwethulwa komkhankaso wokugqoka ijezi leBafana Bafana ngoLwezihlanu
-EZEMVELO KZN Wildlife yethule ngokusemthethweni umkhankaso wokugqokwa kwejezi leBafana Bafana ngoLwezihlanu ukuqubula isasasa lokweseka iqembu lesizwe njengoba lilungiselela imidlalo yeNdebe yoMhlaba ezobanjelwa okokuqala emhlabathini wase-Afrika. Kulo mcimbi obubanjelwe enhloko-hhovisi ye-Ezemvelo eMgungundlovu ngoLwesihlanu lo mhla ziyi-18 kuNhlolanja ka-2010, uDkt Bandile Mkhize
onguMphathi Omkhulu wenhlangano, unxuse bonke abasebenzi ukuba beseke ngokuzinikela iBafana Bafana ukuze imangaze abaningi kule midlalo yeNdebe yoMhlaba. UDkt Mkhize uphinde wamemezela ukuthi i-Ezemvelo KZN Wildlife izodlala indima ebaluleke kakhulu ekwamukeleni izivakashi ezizoqhamuka emazweni omhlaba. Ugcizelele ukuthi izivakashi zizothutheleka ngobuningi eziqiwini, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi
abasebenzi bazamukele ngezandla ezifudumele. â&#x20AC;&#x153;Ngitshelwe ukuthi amazwe ayisi-5 azobamba iqhaza kulo mqhudelwano aqome ukuzinza esifundazweni sethu. Kumele senze isiqiniseko sokuthi ayazihambela iziqiwi zethu. Uma sibaphathe ngemfudumalo, nakanjani bazobuya futhi ngemuva kwemidlalo yeNdebe yoMhlaba. Kumele siphinde sinxenxe amazwe azozinza eGauteng ukuvakashela isifundazwe saKwaZulu-Nataliâ&#x20AC;?, kusho uDkt Mkhize.
Ngemuva kwalokhu, kube sekukhonjiswa ngamafulegi awo wonke amazwe azobamba iqhaza kulo mqhudelwano. Lokhu bekuyingxenye yokunxenxa abasebenzi ukuba beseke amanye amazwe ngenhloso yokwakha ubungani. Ngokuhamba kosuku, abasebenzi banikele eMidmar Dam lapho bethokoziswe khona ngomdlalo kanobhutshuzwayo ngenhloso yokuqubula isasasa lemidlalo yeNdebe yoMhlaba.
Sakha iNhlangano eziMisele ngokuHlinzeka iziDingo Isu Oshicilelweni olubili olwedlule lweNkanyezi sikhulume ngezinto eziningi lapho besizijwayeza khona ngesu elisha kanye nokuthi kungani sidinga leli thuluzi ekuqhubeni imisebenzi yenhlangano. Sesihambe ibanga elide ukuqinisekisa ukuthi isu lethu liyahambisana nemali esinayo kanti sesiqhamuke nesu le-MAP elibhekiswe kuwona wonke umuntu osenhlanganweni. Kumanje siphezu kohlelo lokuqalisa ukusebenza kwaleli su kanti sesilinde ukuphothulwa kwe-Cluster Strategies and Balanced Score Cards yeminyango ukuqinisekisa ukuthi sihlinzeka izidingo
ngendlela ehambisana nesu lethu. Uyacelwa ukuba uzijwayeze ukufunda umbhalo waleli su ukuze uzokwazi kahle ukuthi yini elindeleke kuwena njengomsebenzi we-Ezemvelo.
UHlaka lweNhlangano lokuSebenza Sesihambe ibanga elide nokuqinisekisa ukuthi uhlaka lwethu lwenhlangano lokusebenza luyahambisana nesu lethu kanti sibe neziphakamiso zokuhlanganisa uhlaka lwethu nazo zonke izingxenye zokusebenza esinazo enhlanganweni. Kumanje lolu hlelo selusesigabeni esiphezulu kakhulu
kanti sesilinde ukuthi lugunyazwe yiBhodi bese siyaluqalisa. Uma nje seluphasiswe yiBhodi, sizokube sesiluqalisa ngokukhulu ukushesha.
Ukuvuselelwa kokusebenza kwewebhusayithi ne-Intranet
UHlelo lokusatshaSicabanga ukuthi sewulaliswa kolwazi (ERP) luqaphelile uguquko Lolu hlelo luhamba ngesivinini esiphezulu kanti seluqanjwe ngokuthi yi-Project CatERPpillar futhi eminye iminyango njenge-Point of Sale, iProperty Management kanye ne-Reservations isiyalusebenzisa. Usuku okulindeleke ukuthi lusebenze ngalo kwezinye izinhlaka ezihlanganisa olwezimali, olokukhishwa kwemisebenzi kanye nezinye, kuzokuba ngumhla zingama-26
11|Conservation, Partnerships & Ecotourism
olukhulu olube khona kwiwebhusayithi yethu ne-intranet, lokhu kuhambisana nendlela yesimanje. Siqhamuke nezindlela nokubukeka okwehlukile kodwa okuyintandokazi yakho kusaqukethwe futhi kuningi okumqoka okufakiwe kwiwebhusayithi ukuze isebenze kahle nangendlela elula futhi engcono.
Amalungu eMfolozi APU avakashele i-SAPS NIU Base
ABADLE UMHLANGANISO EMDLALWENI WE-SOCCER FRIDAY
hla zingama30 kuZibandlela ka-2009, uphiko olulwa nokuzingela okungagunyaziwe lwaseMfolozi luthumele amalungu amabili okungo-A Tembe oyiAPU Officer no-Z Myeni ongu-Corporal kwi-SAPS National Intervention Unit Base eduze kwasePinetown. Amalungu eAPU abemenywe lapha yiNhloko yezokuQeqesha i-Inspector A Boshoff kanti acotshelelwe ngolwazi lwangaphakathi lokuthi lolu phiko lusebenza kanjani, luqeqesha kanjani nokuthi lubakhuthaza kanjani abasebenzi balo. Kube yithuba elihle leli kumalungu e-APU lokucobelelana ngolwazi nokuthola okwenzeka ngaphakathi nangezinsiza zokusebenza ngokunjalo nangamaqhinga okuqeqesha asetshenziswa ngamalungu e-SAPS NIU. “Le ndlela yokuxhumana phakathi kophiko olukhethekile lwe-SAPS
kanye nolwe-EKZNW yinhle kakhulu ngokucobelelana ngolwazi nangamacelo okuqinisa ukusebenza komthetho kanti isebenza ukwakha ubudlelwane bokubambisana ekuqiniseni ukusebenza komthetho esikhathini esizayo”, kusho uLawrence Munro oyi-Senior Ranger ye-APU. IMfolozi APU iyathemba ukuthi buzoqiniswa kakhulu lobu budlelwano
ukuze buthele izithelo ezinhle ngezokuqeqesha
nangokuthungathwa kolwazi”, kuqhuba yena.
Iqembu labadlali bas’Okhahlamba Drakensberg abadle umhlanganiso eMidmar ngomhlaka ziyi-19 Nhlolanja 2010.
Ezemvelo Inkanyezi Zulu 2010